Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-India yaseIndiya: Ngaba ekugqibeleni iyahamba?
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
Abatyali mali kutyalo-mali ekugqibeleni bayavela kwinqwelomoya yenqwelomoya yeAir India.
Sele kuyiminyaka eliqela ndizama ukuthengisa umphathi wesizwe, kunye neenzame zokuthintelwa ngezizathu ezahlukeneyo nezizezinye.
Okwangoku kwidokethi ilahleko enkulu yenqwelomoya - njengoko ngubani oza kuyiphatha - umthengi omtsha okanye urhulumente?
Tata Oonyana, eyasekwa I-Air India yomoya Ngo-1932 emva koko waphuma kuyo ngo-1953, uphinde waba ngumniki-zinkonzo wenqwelo-moya, kwaye ungenise iibhidi zezemali kunye nabanye ababhidi abaphambili.
Usihlalo weSpiceJet, u-Ajay Singh, naye wenze isithembiso, kwaye ezinye iimali zotyalo mali ziye zajoyina uSingh kwinkqubo yokubhida ukukhusela inqwelo moya. U-Singh ebengumdlali ophambili kwicandelo lokuhamba ngenqwelomoya iminyaka ethile ngoku, nendima yakhe ngoku Kujongwe i-Air India ngomdla omkhulu.
Ukucocwa kwezokhuseleko kunye nokufakwa kwexabiso eligcinelwe ukuthengisa zizinto ezimbini ezibalulekileyo ekufuneka urhulumente azisombulule. Eminye imiba ebikhathaza ngumbuzo wokuba ungajongana njani nelahleko enkulu eqokelelwe yi-Air India kule minyaka idlulileyo, kunye nendlela eziza kuphathwa ngayo ezinye iiasethi zomgca weMaharaja, kubandakanya ukuthengiswa kwezindlu kunye nokuqokelelwa kobugcisa. Ukuphathwa komhlaba kunye nokutya komoya kuye kwaba yimicimbi exhalabisayo okoko kwavela intetho ye-disinvestment.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, iinzame ezininzi zenziwe zokuthengisa umphathi wesizwe, kodwa ezo nzame zabanjwa umva ngezizathu ezahlukeneyo. Esinye sezizathu eziphambili yayikukuphendula umbuzo wokuba ngubani oza kujongana nelahleko enkulu- umthengi omtsha okanye urhulumente?
Imicimbi yabasebenzi ikwayenye ingxaki, inemibuzo enjengokuba ngubani oza kugcinwa ngumthengi omtsha, kwaye ngubani oza kugxothwa? Imibutho yabasebenzi nemibutho yayiye kwinqanaba elinye inomdla wokuba nezwi kwaye ibicinga nokubhida.
Indima, ukuba ikho, yabathengi bangaphandle yayiyindawo yengxoxo, kodwa ngoku kubonakala ngathi ababhidi abakhulu beze neebhidi zezezimali ngohlobo lokuthatha inxaxheba kukaTatas no-Ajay Singh.
NgoSeptemba 19, 2021 kwi-07: 47
Ndiyazi ukuba ayingoba ndifuna ukuba nawe. Andiyi. Ngamanye amaxesha ndiziva ngathi kufanelekile ukuba nawe, ngokungathi ndifanelwe yintlungu ondizisela yona ngokulula. “Jonga, ukuba uyafuna nyani ukudlula emva kwalo lonke elixesha, kufuneka umxolele ngentlungu akuvise yona, nokuba ungaba.